Miakatra hatrany ny isa 15 indray voan’ny Covid 19
Tarehimarika azo tamin’ny fitiliana ny alahady tamin’ny 8ora maraina hatramin’ny 6ora hariva no notaterin’ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle
omaly tolakandro mahakasika ny fivoaran’ny Covid 19 eto Madagasikara. 257 ny fitiliana vita, ka teto 219 teto Antananariovo, ary 38 kosa tany Toamasina ny ambiny. 15 ny tranga vaovao nampiakatra ny isa rehetra ho 186. Ny 4 tamin’ireo voa dia tamin’ny fitiliana teto Antananarivo, ary 11 tany Toamasina. Herintaona ny zandriny indrindra, ary 54 taona ny zokiny indrindra, ka 8 vehivavy ary 7 lehilahy. Ny 5 dia latsaky 16 taona avokoa. Niampy iray, ka tonga 105 ny sitrana, ary 81 no mbola manaraka fitsaboana. Tsy misy ny marary misy fahasarotana. Nanentana moa ny Pr Vololontiana fa tsy tokony ahilika ireo olona avy voa ka sitrana. Tsy tokony ho henatra izany, ary efa azo antoka ny fahasalaman’ireo olona avy narary, hoy ity Mpitondra tenin’ny CCO Covid-19 ity. 5465 ny fitambaran’ny fitiliana rehetra vita hatramin’izay, izay azo sokajiana ho ambany, raha ampitahaina amin’ny isan’ny mponina amin’ireo faritra efa ahitana izany, fa indrindra mitaha amin’ny isan’ny vahoaka Malagasy. Tsy ampy ve ny tetibola hahafaha-manao izany kanefa tena betsaka ilay sorabola 444 tapitrisa dolara? Marina fa manana finiavana hitsabo an’i Afrika isika fa sao dia tokony hatomboka amin’ny tena fifehezana ny eto Madagasikara aloha?